Home News Wasiir Jamal M. Xassan oo lacag horumaris ah ka qaatay Ganacsade C/qadir...
Wasiir Jamal M. Xassan oo lacag horumaris ah ka qaatay Ganacsade C/qadir X. A. Cadaan iyo qandaraaskii oo la siiyay shirkad Turkish ah! (Warbixin)
Sida Muqadishu Online horay idinkugu soo gudbisay waxa in mudo ah socday isqab-qabsi la xiriira dhismaha wadada isku xirta Jowhar iyo Muqadishu taas oo ay balan qaaday in ay dhisayso dowladda Qatar. Waxaa holwadeen ka aha dhsimaha wadada Jamal M Xassan inkastoo shaqadaan ay ahayd in ay hoos timaado wasaaraddaha Howlaha Guud iyo Wasaaradda Gadiidka hadana waxaa si xoog ah kula wareegtay wasaaradda Qorsheeynta Qaranka arintaas oo ay si toos ah uga danbeeyaan R’aiisal Wasaare Xassan Kheyre iyo Fahad Yasin oo u arkaayay in dhaqaale ka imaanaya ama lagu dhisaayo wadadaas ay ayaga maamulaan.
T/K NISA Fahad Yasin iyo Jamal M Xassan ayaa horaantii sanadkaan waxa ay heshiis hoose la galaan ganacsato soomali gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanka Hirshabeele. Heshiiskaas ayaa waxa lagu go’aamiyay in shirkad ay leeyihiin reer Xaaji Abukar Cadaan la siin doono qandaraaska lagu dhisaayo wadada. Si hadaba taas u suuragasho waxa uu Jamal M. Xassan oo ah nin lagu yaqaan qayanadda dahsoon (Con-Artist) ayaa shirkada uu madaxda ka yahay Cabdulqadir Xaaji Abukar Cadaan, isla markaan sheegto inuu yahay madaxad Rugta Ganasiga ee Dowlad Goboleedk Hirshabele kula heshiiyay in ay lacag hor maris ah siiyaan Wasiir Jamal taas oo la isla gartay in ay noqoto $450,000 (afar boqol iyo konton kun) oo doolar. Ujeedada Lacagta loo bxiyay ayaa ahayd in Wasiir Jamal xaqiijiyo in qandaraaskaas ayan cid kale kula tartamin shirkada uu hogaamiyo Cabdulqadir Xaaji Abukar Cadaan. Lacagta oo boorso ku jirto ayaa Wasiir Jamal loogu geeyay xarunta Nabad Sugidda Qaranka (NISA) oo uu goob joog ku ahaa T/K NISA Fahad Yasin.
Sida aan hore idinkuugu soo sheegnay dowadda Qatar ayaa ka biyo diiday in ay shirkad Somali ah siiso qandaraaska waxaana ugu danbeeyntii lagu wareejiyay shirkad Laga yeehay Turkiga. Jamal iyo Fahad markii ay ogaadeen in shirkadaha Somaliya laga leeyahay loo diiday in ay ka qayb galaan tartanka aya awaxa ay sidoo kale heshiis qarsoodi ah la galaan shirkad Qatar laga leeyahay oo iyadana laga qaatay lacag horumaris ah, shirkadaasna waa ay ku guul daraysatay in hesho qandaraaska.
Kulankii isku darka laba beelood ee Warsangali Daarood iyo Warsangali Abgaal ee dhawan Muqadishu lagu qabtay ee uu ka hadlay Wasiir Jamal ayaa daba socday qandaraaska la siiyay Cabduladir Xaaji Aburar oo ah nin ka soo jeeda beesha Warsangali Abgaal.
Ganacsade Cabdulqadir Xaji Abuukar iyo iyo Abihiis Xaaji Abuur aya u yeeray qaar ka mida odoyaaasha dhaqanka iyo gancsato iyaga oo ka codsaday in lacagtii Jamal M. Hassan qaatay laga soo celiyo madaama uu qabdaraaskii gacanta loo galiyay shirkad Turki ah.
Waxaan ugu baaqaynaa Barlamaanka Somaliya gaar ahaan Gudiga Maaliyada ee labada aqal in ay u yeeraan wasiiradda iyo hay’adaha qusayso dhismaha wadada si ay u ogadaan musuqa ka jira dhismaha wadada. Dowladda uu hogamaiyo MW Farmaajo waxa ay ku doodaa in ay ka hor tagayaan musuq-maasuq laakiin nasiib xumo hogankii ugu sareeyay dowladda ayaa musuq cayd leh lugaha kula jira.
Previous articleSoomaaliland oo ka Jawaab Celisay Hadal kasoo Yeeray Rw-Ku Xigeenka Soomaaliya!!
Next articleDowladda Somaliya oo dalbatay in cunaqabateynta saaran dalka Eritereeya laga qaado
Dowladda Jabuuti Oo Ka War Kasoo Saartay Qilaafka Maamul Goboleedyada Iyo...
Taliska Booliska Magaalada Caabud-waaq Oo Sheegay Iney Baaritaano Ku Wadaan Rag...